Ny tena vokatra, mahomby, raitra, ary mety fomba manidina dia amin'ny alalan'ny manidina tsy miankina. Ny vokany ny 20% kokoa ny vokatra. Etsy ankilany, manidina ara-barotra Leads ho 40% Mitete ao amin'ny vokatra.
Amin'ny fiaramanidina manokana mpanatanteraka sata mamonjy fotoana ianao satria, ny fiaramanidina tsy manana ny hanala amin'ny seranam-piaramanidina lehibe izay manana birao tsy misy farany. Ny fiaramanidina manokana dia afaka hiala amin'ny tsy ampy taona seranam-piaramanidina. Maro ireo seranam-piaramanidina lehibe kely noho ny.
Ihany ny iray amin'ny dimy fiaramanidina manokana tany, ary lasa avy amin'ny seranam-piaramanidina lehibe. Airports kely fifamoivoizana hiatrika mihoatra noho 50% ny tsy miankina fiaramanidina. 30% ireo fiaramanidina faharoa hiala amin'ny seranam-piaramanidina.
Fly Rehefa tianao
Amin'ny ara-barotra airline, manamboatra ny fandaharam-potoananao mba hanomezana izay ilain'ny iray airline. Amin'ny fiaramanidina manokana mpanatanteraka Satan'ny, izany no fomba hafa manodidina.
tsy manan- tsahala haitraitra
Ny interiors ny fiaramanidina manokana dia mahagaga. Izy ireo na inona na inona ianao tsy toy ny efa nahita. Misy fiaramanidina no interiors voaravaka volamena ary volafotsy. Afaka mahita fiaramanidina amin'ny faucet mitantam nopetahany takela- 24 karà volamena. Hafa mangatsiatsiaka Accessories ireo fiaramanidina ahitana volamena hilatsaka lovia famafazana, seza nipetraka teny bokotra sy tena raitra fehikibo fiarovana fitaovana.
Ny Cream amin'ny fiaraha-monina lalitra Private
Anisan'izany Bill Gates, John Travolta, Oprah Winfrey, Jackie Chan, ary Tom Cruise. John Travolta manana fiaramanidina miankina iraika ambin'ny folo anisan'izany ny Boeing 707. Jay-Z manana ny Bombardier Challenger 850 ary, Tom Cruise manana ny Gulfstream IV. Top orinasa mpitantana avy amin'ny Google, Microsoft, Coca-Cola, ary hafa Fortune 500 manidina orinasa tsy miankina. Madinika sy salantsalany tapaky ny orinasa manao ny tsara isan-jato ny fampiasana fiaramanidina manokana. Ambony mpandraharaha sy Hollywood ireo olo-malaza no mampiasa fiaramanidina manokana. Technical, varotra, ary ny asa fanompoana matihanina ihany koa ny mampiasa io fomba fitaterana.
Tsy voatery ho manana fiaramanidina manokana hankafy ny haitraitra sy ny voninahitra ny fiaramanidina manokana. Afaka boky ny mpanatanteraka fiaramanidina manokana Sata ho mitaingina ny fiainanao.